Qiimaynta Caafimaadka - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Adeegyada Caafimaadka > Qiimaynta Caafimaadka
Qiimeynta caafimaadka waxay bixisaa macluumaad waxtar leh oo ku saabsan xaaladdaada caafimaad iyo halista.
Waa maxay Qiimeynta Caafimaadka?
Qiimeynta caafimaadka waa baaritaan gaaban oo lagu weydiinayo caafimaadkaaga iyo qaab nololeedkaaga. Waxaan u adeegsanaa si aan u eegno xaaladdaada caafimaad, halista, iyo caadooyinkaaga si aan u horumarinno qorshe daryeel shaqsiyeed si loo ilaaliyo loona hagaajiyo caafimaadkaaga. Waxay tilmaamaysaa meelaha muhiimka ah ee hagaajinta waxayna soo jeedinaysaa siyaabo lagu maareeyo xaaladahaaga. Macluumaadkaaga qiimeynta caafimaadka waa qarsoodi. Kooxdaada daryeelka waxay u adeegsan doonaan natiijooyinka ka soo baxa qiimeynta caafimaadka si ay u abuuraan qorshahaaga daryeelka oo ay ka wada hadlaan xulashooyinka si aad caafimaad ugu hesho.
Haddii aad ka diiwaangashan tahay MA Dual Plan (HMO SNP) ama laguu gudbiyey maaraynta kiiska, waxaad heli doontaa warqad la socota Qiimeynta Caafimaadka markii aad isqorto. Tani waxay naga caawineysaa inaan ogaano meelaha si aan u hagaajino baahiyahaaga daryeel caafimaad iyo taageero. Waxaad dhameystiri doontaa qiimeynta caafimaadka sanad walba. Waxaan sii wadi doonnaa inaan kormeerno horumarkaaga oo aan tixgelinno baahiyahaaga caafimaad. Maamulaha kiiskaaga ayaa kormeeri doona sida ugu wanaagsan ee qorshahaaga daryeelka ee hadda u shaqeynayo iyo wadajirka, waxaad ka shaqeyn doontaa sameynta qorshe ku habboon baahiyahaaga iyo qaab nololeedkaaga.